Maxaa kordhiyay khasaaraha dagaalka Balad Xaawo? - Axadle
Ugu yaraan 11 qof oo ay ku jiraan shan carruur ah ayaa la dilay, 15 kalena waa la dhaawacay, dhammaantoodna waa rayid, sida ay sheegeen dadka deegaanka Axadle oo saacado badan la dagaallamayay dadka ku nool degmada Balad Xaawo. Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Cabdinuur Janan
Lix askari ayaa ku dhimatay dagaalka tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Ilo xog ogaal ah ayaa Axadle u sheegay in qasaaraha ugu badan ee dadka rayidka ah uu ka dhashay madaafiic lagu garaacay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Balad Xaawo, sidoo kale rasaas iyo rasaas ay ridayeen dad rayid ah oo ka fog goobaha lagu dagaalamay. .
Dr Maxamud Goomey ayaa BBC-da u sheegay in ugu yaraan 14 qof la dhigay isbitaalka Balad Xaawo oo qaba dhaawacyo kala duwan isla markaana lala tacaalayo dhaawacyadooda.
Qof ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in magaciisa la xigto ayaa Axadle u sheegay in dadkii ugu badnaa ay isla xalay ka barakaceen magaalada Balad Xaawo, halka qoysas kooban ay saakay ka baxeen degmada.
Dagaalka ayaa la sheegayaa inuu istaagay barqanimadii maanta, in kastoo dhinacyada dagaalamaya ay wali is hor fadhiyaan waxaana macquul ah in marwalba uu dib u bilowdo sida ilo wareedyo kala duwan oo Axadle ah ay xaqiijiyeen.
DFS iyo DFS ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ka dhacay Balad Xaaow, isgaarsiinta hawada ayaa ka go’an waqti ka waqti, taasi oo sii adkeysay raadinta xogta.